တူတာတွေတော်ပါတော့….Please !!!! | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aung San/Aung San Suu Kyi » တူတာတွေတော်ပါတော့….Please !!!!
Posted by အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် on Dec 5, 2015 in Aung San/Aung San Suu Kyi, Creative Writing, Think Different | 20 comments
ဒါက ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကပုံ
ဒါက ၂၀၁၅ခုနှစ် မှာတွေ့ရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ဒီဓါတ်ပုံလေးတွေကို…ဒီနေ့မနက် The Landslide Victory’ Post (FB) မှာတွေ့တော့
ဒေါ်စုပုံကတော့ ဒီနေ့ခေတ်လို ကင်မရာတွေ ၊ လက်ကိုင်ဖုန်းတွေပေါတဲ့ခေတ်မှာ
သူ့အိုက်တင်အမျိုးမျိုး ၊ နေရာအမျိုးမျိုးမှာရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေရနိုင်တာသိပ်မဆန်းလှ…
..ကျန်တဲ့ပုံတွေထက် လှေပေါ်တက်နေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ပုံကို အမိအရဖမ်းယူနိုင်ခဲ့တာ( ကင်မရာမန်းရိုက်ဖြစ်ခဲ့တာ) ထူးဆန်းတဲ့အထဲထည့်ရလိမ့်မယ်..
၅ ၊ ၁၂ ၊ ၂၀၁၅
.ကျနော်ရေးတဲ့စာအပေါ်ပိုဒ်တချို့ အပေါ်ဓါတ်ပုံဘေးရောက်နေတယ်…စာကအောက်ဆုံးမှာတစ်စုတဝေးတည်းဖြစ်ရမှာ
ဦးစော လို ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ ဒီနေ့များလွန်းတာရော၊ ပိုသာဆိုးတာရော မို့ အဲဒါကို ညှိပြီး ကြည့်ဖို့ တောင် ခက်သား။
ဒီတော့ သူရို့ဟာ သူရို့ အချင်းချင်း ဦးရာသူ၊ အားသာသူ က ချေ နင်း သွားကြပါစေဘဲ ဆုတောင်းပါတယ်။
ဦးစောက.. တော်တော့်ကို တော်တဲ့သူတယောက်လို့တော့ ဖတ်ဖူးမှတ်ဖူးတယ်…။
ကျပ်အကဲဖြတ်မိသလောက်တော့ ဦးစောက သူများချောက်ချတာကြီး ခံရနေကျပဲ..
သတိကတော့ ပိုတယ် မရှိပါဘူး
၁- ပြောပြန်လျှင်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တရားလွန် ကာကွယ်နေသည် ပြောကြမည်။ သို့သော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေရာမှ စဉ်းစားသောအခါ ထိုလူကြီးနှင့် တွေ့ကို တွေ့ရလိမ့်မည်။ နိုင်ငံရေးတွင် မပါဝင်တော့ပါ၊ နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်ခြင်း မရှိတော့ပါဟူ၍ မည်မျှပင် အသံကောင်း လွှင့်ပါစေ၊ ဟုတ်မဟုတ် စူးစမ်းသည့် သဘောနှင့်လည်း တွေ့သင့်သည်။ ဟုတ်ခဲ့လျှင်လည်း ပိုတွေ့ရမည်။ တွေ့ဆုံခြင်းသည် နေရာပေးခြင်းမဟုတ်။ အာဃာတ ကင်းစင်ကြောင်း ပြရန်ထက် မပိုသည်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ထို့ထက် ပိုကာ အာဏာစစ်စစ် ရှိနေသေးသူနှင့် ဆွေးနွေးသည်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် တရားဝင် ဥပဒေအရ ဟု တွင်တွင်ပြောခဲ့သူများကို ကျော်၍ အာဏာရှိနေသေးလျှင် တိုင်းပြည်အေးချမ်းရေးအတွက် တွေ့ကို တွေ့ရပေမည်။ တစ်ခုပဲ ရှိသည်။ တွေ့ဆုံခြင်းသည် အပေးအယူအတွက် မဖြစ်စေရ။ အပေးအယူ ဖြစ်ခဲ့သည်တိုင်လည်း အနာဂတ်ကာလအတွက် အပေးအယူ မဖြစ်စေရ။ (ဖြစ်ဟန်တော့ မတူပါ) ပြီးခဲ့သော ကိစ္စများအတွက်မူ မကျေနပ်သည့်တိုင် လက်ခံသည်။ သို့သော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြည်သူကို ချမပြသေးသည့်အတွက် ကြိုတင်ကာ ရန်ထောင်ရန် မသင့်ဟု ယူဆသည်။
၂- ထိုမြေးအဘိုးကို စိတ်စေတနာကောင်းဟု ယူဆကာ ၀မ်းပမ်းတသာ ရှိနေသူများကိုတော့ သတိပေးလိုသည်။ အချိန်တွေ အများကြီး ရှိခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းအစိတ်လောက် တွေ့ဆုံပါရစေဟု ထိုအမျိုးသမီးကြီး တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဟန်ပြသာတွေ့ခဲ့သည်။ လုပ်ချင်ရာလုပ်ခဲ့သည်။ အခု ထိုအမျိုးသမီးကြီး ပြည်သူ့အားနှင့် အနိုင်ရလုနီးနီးရှိကာမှ တိုင်းပြည်အတွက်ဆိုပြီး ချစ်ပြနေသည်ကို၊ နေရာကောင်းယူသည်ကို ၀မ်းမြောက်ရန် အကြောင်း တစိုးတစိမှ မရှိ။ နောက်ကွယ်တွင် ၀ှက်ထားသော ဓားတစ်လက် ရှိနေမည်မှာ အသေအချာဟု ပြောချင်သည်။
၃- ဖြစ်လောက်သောအကွက်သည် မြေးဖြစ်သူကို ဇမ်းတင်ကာ နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံပေါ် တင်ပေးခြင်း ဖြစ်လိမ့်မည်။ အထပ်ထပ်ပြောခဲ့ပါသည်။ အင်မတန်ငြိမ်းချမ်းနေသော အကောင့်သည် အောက်မှ ဆဲဆိုသူမရှိဆိုသည်မှာ ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ တစ်နာရီမလတ်စောင့်ကြည့်ကာ ထိုင်ဖျက်နေမှ ရမည်။ ထိုသို့ဖျက်ရန် အဖွဲ့အစည်းရှိမှ ရမည်။ ပရိုလက်ဖြင့်ရေးသော အရေးအသားသည် ကိုယ်ပိုင်လား။ အခု ကျွန်တော့်ကို ထိုအကောင့်မှ ဘလော့ထားသည်။ ကွန်မန့်သွားမပေးခဲ့ဘူးပါ။ like မလုပ်ခဲ့ဘူးပါ။ ဖေါ်လို မလုပ်ခဲ့ဘူးပါ။ တခါက အဓိပတိမြေးမှ သာမန်အကောင့်လေးတစ်ခုကို ရှာဖွေ ဘလော့သည်မှာ မဖြစ်နိုင်ပါ။ သေချာသည်က အဖွဲ့လိုက် နေရာယူလှုပ်ရှားမှုသာ ဖြစ်လိမ့်မည်။
၄- ဂွမ်းသွားသည်ကတော့ အဘနှင့် မှူးကြီး ဖြစ်လိမ့်မည်။ ပြည်သူ့အမြင်တွင် ရုပ်သေးများအဖြစ် (ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်) ကျရောက်သွားသည်။ အဘိုးကြီး မီးစိမ်းပြမှ လှုပ်ရသော ရုပ်သေးရုပ်များဖြစ်ကာ နိုင်ငံရေးနောက်ခံ ဘာမှ မရှိသော ငမျောက်ငချောက်မြေးလေးလောက်မှ အသုံးမ၀င် ဖြစ်သွားသည်။
၅- မိတ်ဆွေတယောက်၏ အတွေးကို ပြန်၍ မျှဝေလိုသည်။ အလွန်အမင်း စိတ်ပူရန်တော့မဟုတ်။ သတိရှိစေရန်ပါ။ ထိုလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ဒီမိုကရေစီ အရေးလှုပ်ရှားသူတို့အား မုန်းတီးနေစေရန် အိုင်ဒီယာကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ရိုက်သွင်းလာခဲ့သည်။ ယခု ခရီးတော်တော်ပေါက်ခဲ့ပြီ။ အငယ်ပိုင်း အရာရှိများသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တော်တော် မုန်းသူများ ရှိနေပြီ။ ထိုအချိန်ဝယ် သူရို့ ခေါင်းဆောင် ဘုရားတစ်ဆူ ဂူတလုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက ဖက်လှဲတကင်း ချစ်ပြလိုက်သောအခါ သူတို့ အကောက်အယူများကို လှုပ်ခါပစ်လိုက်နိုင်သည်။ ရှော့ရသွားနိုင်သည်။ ဦးဆောင်လမ်းညွှန်သူတို့ မရှိသောအခါ မြန်မာပြည်ပြိုကွဲစေရန် ကြံရွယ်နေသော သည်အဘွားကြီး မရှိစေရန် ငါ့တာဝန်ဟု စောက်ရူးထသူတို့ ရှိမလာနိုင်ပါဟု ပြောရန်ခက်လှသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လုံခြုံရေး အင်မတန် အရေးကြီးသော အချိန်ဟု မြင်ပါသည်။
၆- ကိုယ်တွေကတော့ ၀မ်းမသာပါ။ ဥပဒေအရဟု တွင်တွင်ပြောထားသူတို့ စကားမှန်လျှင် သည်မြေးအဘိုး လုံးဝမလို။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို လုပ်ကြံသူသည် အင်္ဂလိပ်မဟုတ်.. အိန္ဒိယသားမဟုတ်..။ မြန်မာတိုင်းရင်းသားမဟုတ်..။
လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲအတူတတ်နိုင်သလောက် တိုက်ပေးခဲ့သော ဗမာ… ဦးစောဖြစ်ပါ၏။
ဒီခေတ်တွင်.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် ဦးစောနေရာဖြစ်သွားနိုင်သူမှာ… စစ်တပ်နှင့်သူ၏မိတ်ဆွေများဖက်မှထက်… ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖက်မှ ရပ်တည်ခဲ့သော သူ(ပို) ဖြစ်နိုင်ကောင်း၏။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ရန်သူ ကို မိတ်ဆွေဖွဲ့လိုက်နိုင်ချိန်မှာ အဲဒါ ကဘဲ အမှား လဲ လို့ ပြောသူ တွေ ပေါ်လာပါပြီ။
ဦးသန်းရွှေ လက်ထဲ ပါဝါရှိနေသေးတာ မသိခဲ့ကြတာလားမသိ။
သူတို့ဆီက မီးစိမ်းပြလိုက်တာ ကို မချိမဆန့် စိတ်ပျက်နေသူ တွေ မြင်လိုက်ရတာ စိတ်ပျက်စရာဘဲ။
တကယ်တော့ စစ်တပ် ထဲ က အငယ်တန်းတွေ ဆိုတာ ဦးဏှောက်ဆေးခံထားရတာ မို့ ထူးပြီး ထွက်လာစရာမရှိ။
ထိပ်က ကြိုးဆွဲပြီး ခိုင်းသမျှ ပျော်ပျော်ကြီး လုပ်နေသူ တွေ များပါ တယ်။
အခုဘဲ ကြည့်။ အရင် ဒေါ်စု မွတ်စု ကနေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့၊ အန်တီစု တို့ လေသံပြောင်းကုန်ပြီ။
တစ်ဖက် က အဲလို ဖြစ်သွားတာ ကို မရှုစိမ့်နိုင်သူများ က အလံခိုးတွေ၊ ကိုးတန်းအောင် အဖွဲ့ တွေက တော့ ထားပါတော့။
ကိုယ့်ဖက် က လဲ ပါနေကြလေရော။
ရလာဒ်ကောင်းထွက်လာတာ ကို ဘာမှ ကွန်ပလိန်းစရာ မရှိပါဘူးးး
အဲဒီ ရလာဒ်ကောင်းးအတွက် မျောက်လောင်းး ကို ရှိခိုးးမတတ်တော့ ကျေးဇူးမတင်နိုင်ဘူးး
ဖိုးလပြည့်က… စိတ်ကူးပေါက်ပြီး… ဒီလိုလုပ်..ဟိုလိုလုပ်.. လျှောက်လုပ်မှာကို… သူ့အဖိုးက.. “အေး.. အေး… ” ဆိုပြီးခွင့်ပြုမယ်လို့.. ဇီမမ, ထင်နေသလားတော့မသိ…။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း.. ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်လာအောင်.. ဘယ်နှနှစ်များ … စိတ်ပင်ပန်းစွာပြင်ဆင်လုပ်ခဲ့ရတယ်မသိ..။
ဦးရွှေမန်းနဲ့တောက်လျှောက်တွေ့နေတာဟာ.. ဒီရလဒ်လိုချင်လို့ ဟုသာ ထင်ပါ၏..။
နိုင်ငံရေးတွင်… မတော်တဆ တိုက်ဆိုင်သွားခြင်းဟူသည်… မရှိ..။
အထက်မြန်မာပြည်က အဖွဲ့ချုပ်အမတ်တွေနဲ့ဒေါ်စုတွေ့တော့… တော်တော်ကို ပျော်ရွှင်တက်ကြွနေပါသတဲ့..။
မပေးးမဖြစ် ပြန်ပေးးရမယ့် အရာ ကို
ပြန်အပေးးမှာ သူ့မြေးးကို နာမည်ကောင်းးနဲ့ ထုတ်တယ်..
ဒီအထိလည်းး လက်ခံလို့ ရနေဒါပဲ..
မလို အပ်ပဲ ကျေးဇူးတွေ စွတ်တင် ချီးမြှောက် ဖားးယားးနေဒါ တွေ ကို ကြည့်မရလို့ ပြောနေတာ…
ခါတိုင်းဆို မျောက်လောင်းးကို တောက်ဖတ်လုပ် မပြောဘူးးးး
ဒေါ်စု ကောင်းးသလို လုပ်တာ ကန့်ကွက်စရာမရှိ…
မျောက်လောင်းး အောက်ဆွဲလုပ်နေဒါတွေ သောက်မြင်ကတ်လို့ ပြောတာာ .. ကိုယ်ကပဲ အဆင်ပြေတာကို မလိုလားးသူဖြစ်ရသေးးးး
လွတ်လပ်ရေးး မီးးရှူးတန်ဆောင် ,
ဒီမို ဖခင်ကြီးး ဖြစ်သွားးမှာာ..
မသကာ.. သူ့ပိုက်ဆံစက္ကူလေး.. ဒေါ်လာ သိန်းဂဏန်းလောက်နဲ့ရောင်းရချင်ရောင်းရမယ်..။ ပြတိုက်ရောက်ချင်ရောက်မယ်..။
အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့..ရွှေ-စု တွေ့ဆုံပွဲပုံလေးတောင် ဓာတ်ပုံမရိုက်လိုက်နိုင်တဲ့… သူစီစဉ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုချင်ဟန်ရှိတဲ့ ဖိုးလပြည့်ကို.. ဘယ်သူက.. ဘယ်လောက်အထိယုံမှာလည်း..။
ကျုပ် တူမလေး အတော် တင်း နေပုံဘဲ။
ဒီမယ် သမီး ရဲ့ တို့တွေ အချိန်ကုန်ခံ၊ လေကုန်ခံ ပြီး ဒီ နိုင်ငံရေးတွေ ပြောနေတာ ကိုယ့်အတွက် ဘာမှ မျှော်လင့်လို့ မဟုတ်ဘူး။
ဘဝ မှာ ဒီလောက် ဆင်းရဲတွင်း မနက်သင့်ပါရက် နဲ့ နက်နေ ရ သူ တွေ ကို အဲဒီ တွင်းထဲ က ဝိုင်းပြီး ထုတ်ဖို့ပါ။
သူကြီး ပါးစပ်ဖျား က မချ တဲ့ ကျိန်စာ ဆို တာ တကယ်တော့ စိတ်ဓာတ် တွေ က ကျိန်စာဖြစ်နေတာပါ။
တစ်ဖက် က မကောင်း တဲ့ စိတ်ဓာတ် ကို မြင် နေရင်၊ ဒါဟာ မကောင်းဘူးလို့ သိနေရင် အဲဒီလို စိတ်နဲ့ ပြိုင်ဖို့ သင့်ရဲ့လား။
အခုချိန်မှာ သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက် အမြင်တိမ်းပြီး ဆဲ ဆို နေတာကြတာ တောက်လျှောက်ပါ။
အခု ကိုယ့်ဖက် က သာနေပြီ ထင်ရပေမဲ့ တကယ် သက်ပြင်း ချ ရဲ ပြီ တဲ့လား။
သူတို့ လဲ ထွက် သာ အောင် နေရာလေး မျှ ပေးလိုက် ရင် ပိုပြီး လှပ တဲ့ ဇာတ်သိမ်း မဖြစ်ပေဘူးလား။
Box ထဲ က ထွက် ပြီး နဲနဲလေး ပို စဉ်းစား ကြည့်လိုက်ပါ သမီး ရေ့။
ဒီလို ပြောလို့ အမြင်မတူတိုင်း တို့ တွေ အမုန်းပွါးစရာ မဟုတ်ပါဘူး မဟုတ်လား။ :-))
နိုင်ငံရေး အတွေ့အကြုံ၊အသက်အရွယ်၊ ဘာသာရေးအသိ/အကျင့်မှာ ဒေါ်စုက အခြေအနေအရ အဖေထက်သာသွားပြီ။ ဒါ့ကြောင့် ကျန်တာတော့ ဆက်မတူလောက်တော့ပါဘူး။
. kai says:
ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ဒေါ်စု အချက်တစ်ခုမှာ တူသွားမှာကို ကျုပ်ကြောက်တယ်….
ရိုးဖြောင့်မှု့ကို ဘာနဲ့မှ မလဲဘူး … ဆိုတဲ့အချက်ပဲ..။
ကွင်းမျိုးစုံ ကို ကြုံရနိုင်တယ်..
အဲဒါကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အများကြီးသာ မယ် ထင်ပါတယ် ကိုပါရေ။
အသက် နဲ့ လိုက်ပြီး အတွေ့အကြုံ တွေ က သူ့ ကို ပညာပေးထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
အမေစုကတောင် သူ့ဖေဖေထက် ပိုတော် ပိုအနစ်နာခံ ပိုဇွဲကြီး ပိုစိတ်ဓါတ်ပြတ်သားခိုင်မာပြီး
ဟုတ်တယ်…တူပါတွေ ရပ်ပေးပါတော့ဗျို့လို့သာအော်ချင်ပါတယ်……….